Bandhigga Qalabka Caalamiga ee Shiinaha 2020
MAGACA XADGUDHAN EE XUN
SOO KORDHIN XARUN
Shiinaha International Hardware Show (CIHS) waxaa la aasaasay sanadkii 2001. Tobankii sano ee la soo dhaafay, Shiinaha International Hardware Show (CIHS) waxay la qabsatay suuqa, warshadaha adeegga oo ay si dhakhso leh u horumariyaan. Waxaa hadda si cad loo aasaasay inay tahay bandhigga labaad ee ugu weyn adduunka marka laga yimaado INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE ee Jarmalka. CIHS waa madal ganacsi oo ay doorbidaan soosaarayaasha waxsoosaarka iyo ururada ganacsiga awood u leh aduunka oo dhan, sida Xiriirka Caalamiga ah ee Qalabka Qalabka iyo Ururada Guryaha (IHA), Ururka Soosaarayaasha Qalabka Jarmalka (FWI), iyo sidoo kale Soosaarayaasha Qalabka Gacanta ee Taiwan ' Ururka (THMA).
Bandhigga Caalamiga ah ee Shiinaha (CIHS) waa bandhigga ganacsiga ugu sarreeya Aasiya ee dhammaan qalabka iyo qaybaha DIY ee bixiya ganacsatada takhasuska leh iyo kuwa wax iibsanaya oo leh noocyo kala duwan oo alaab iyo adeegyo ah. Waxaa hadda si cad loo aasaasay inay tahay saamiga ugu saameynta badan ee soo saaraya fayadhawrka Aasiya ka dib INTERNATIONAL HARDWARE FAIR ee cologne.
Taariikh: 8/7/2020 - 8/9/2020
Goobta: Shanghai New International Expo Center, Shanghai, China
Abaabulayaasha: Ururka Qaranka ee Qalabka Shiinaha
Guddi-hoosaadka Warshadaha Fudud, Golaha Shiinaha ee horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah
Diirada saar u adeegida dhoofinta shirkadaha qalabka Aasiya
Diiwaangalin ballaaran oo wax iibsadayaal tayo sare leh oo dibedda ah kuwaas oo kaqeyb gala barnaamijka isku aadka ganacsiga
Ka faa'iideyso khibradda ururka qalabka Shiinaha ee CNHA oo adeegso aqoonteeda si aad u gasho suuqa Shiinaha
Aag carwo dheeraad ah oo loogu talagalay aragtida wax soo saar badan
Kaqeybgal dhacdooyinka goobta, isbarashada ganacsiga iyo macluumaadka horseedka hal talaabo
Taageero xoog leh oo ka socota "INTERNATIONAL HARDWARE FAIR Cologne"
Bandhigayaasha qeybta wax soo saarka: Qalabka, Qalabka gacanta, Qalabka Awoodda, Qalabka Pneumatic, Qalabka Farsamada, Mashiinka xoqida, Qalabka Alxanka, Qalabka Qalabka, Qufulka, badbaadada shaqada iyo qalabka, Qufulka & furayaasha, Qalabka Amniga & nidaamka, Badbaadada shaqada & ilaalinta, Qalabka Qufulka, Qalabka Qalabka, Qalabka wax soo saarka birta, qalabka baaritaanka, qalabka daaweynta dusha sare, bamka & waalka, DIY & qalabka dhismaha, qalabka dhismaha & qaybaha, qalabka guryaha, qalabka birta qurxinta, dhejiska, cidiyaha, siligga iyo mesh, qalabka wax lagu farsameeyo, qalabka wax soo saarka birta, qalabka baaritaanka, oogada qalabka daaweynta, Bamka & waalka, Beerta.
Martida Nooca: Ganacsiga (Tafaariiq / Jumlo) 34.01%
Dhoofiye / Dhoofiye 15.65%
Bakhaarka qalabka / Xarunta guriga / Bakhaarka Waaxda 14.29%
Soo-saar / Faa'iido 11.56%
Wakiil / Qaybiyaha 7.82%
Isticmaalaha ugu dambeeya ee alaabada 5.78%
DIY Xamaasad leh 3.06%
Shirkadda Dhismaha & Qurxinta / Qandaraaslaha / Injineer 2.72%
Jaaliyad / Wadaag 1.02%
Naqshadeeye / La-Taliyaha / Real Estate 1.02%
Warbaahinta / Saxaafadda 0.68%